Music bụ fun mgbe i nwere ike na-ege ntị ọ bụla kwaa na ụda. Mmetụta nke dị ọcha music nwere ike ịmepụta a sensashion nke ahuhu na ịnụ ọkụ n'obi na a music n'anya nwere ike ejikọta. Dị nnọọ ka a na-ekiri fim ma ọ bụ video na High Definition bụ ihe ịtụnanya ahụmahụ, nweta elu àgwà music bụ a na-akpali akpali mmetụta. Spotify mere ka a dị na a click. Ihe niile ị chọrọ ime na-eso ụfọdụ mfe nzọụkwụ na ị pụrụ ịnụ ụtọ elu àgwà music na ina. On Spotify music àgwà dị elu dị ka 320kbps dị. Ma, e nwere ndị ụfọdụ na-agaghị emeli ka ịnweta na elu àgwà gụgharia.
Mgbe anyị na-banyere music, ụda àgwà-apụghị mie ala. Na Spotify mgbe chọrọ tụkwasịrị ya ọrụ-eme ka ọ a mma oke na ahịa. Spotify nyere nhọrọ dịgasị iche iche maka dịgasị iche iche nke ọrụ. Site music Genres, listi ọkpụkpọ, artists, otu na-ọrụ, na redio ụgbọ, music si dị iche iche ugboro, na gụgharia àgwà nke music na ha chọrọ na-ege ntị. Ugbu a na nke ahụ bụ otu ogologo ndepụta atụmatụ, ma anyị ga-atụle ugbu a ị pụrụ melite music ege ntị ahụmahụ na ngwaọrụ gị. Ị nwere ike ịhọrọ si dị nhọrọ na àgwà na suut netwọk gị data ojiji atụmatụ na nwekwara ike mezu ọchịchọ gị na-ege ntị àgwà music.
Part 1. Elu àgwà Spotify na kọmputa
Part 2.How ịgbanwe music àgwà na App (Android na iOS ọrụ)
Part 3.How ka bit-ọnụego ka mma nkwanye àgwà
Download Spotify High Quality gụgharia music free na TunesGo
1.High àgwà Spotify na kọmputa
1. N'ihi na Mac ọrụ
Ebe a bụ ihe Mac ọrụ kwesịrị ime ka het elu àgwà Spotify gụgharia. Nzọụkwụ ndị dị mfe na ike ga-rụrụ site onye ọ bụla na-eji Spotify.
: Pịa na Spotify menu
: Họrọ mmasị si mmapụta menu
Site music àgwà ngalaba, ịgbanwee na toggle Gbanye (amama green) na ị na-ohere elu àgwà music gụgharia.
2. N'ihi na windows
Pịa na edit menu, Họrọ mmasị na ịgbanwee na music àgwà toggle Gbanye na-ege ntị elu àgwà music.Please mara na nke a elu àgwà gụgharia dị maka adịchaghị na akaụntụ naanị.
2.How ịgbanwe music àgwà na App (Android na iOS ọrụ)
Lee ndị dị mfe stels ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe music àgwà na gị ngwa. Cheta, mma music àgwà ka mma ga-ị ada ahụmahụ. Ya mere, ọ dị mkpa na i nwere kasị elu music bit ọnụego ma ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ihe kasị mma ahụmahụ.
: Gaa na menu ma họrọ Ntọala
: Enweta na music àgwà na họrọ iyi àgwà (nkịtị, elu ma ọ bụ oké)
3.How ka bit-ọnụego ka mma gụgharia àgwà
Bit ọnụego-atụle ga-a ji atụ ọnụ ọgụgụ na dịruru ụda àgwà nke ọ bụla ọdịyo ma ọ bụ music track. Higher ọnụego mma bụ àgwà. Ma o nwere ike ịbụ elu ezuru upto a ụfọdụ ịgba. N'ozuzu elu àgwà music na-gosiri dị elu dị ka 320 kbps (mgbe ụfọdụ ka a 480 kbps) mgbe a nkịtị àgwà music audio ga-enwe bit ọnụego gburugburu 160 kbps.
Spotify mere ka 3 dị iche iche bit etoju dị maka ọrụ aka ha music na-ege ntị ahụmahụ. All ị chọrọ ịga bụ na-eso ndị na-esonụ.
Cheta na: Ọ bụ ezie na ọrụ a dị maka adịchaghị na akaụntụ ọrụ, ma free ọrụ nwekwara ike welie bit ọnụego ma na-eji ndị ọzọ ngwa na internet (i nwere ike na-akpọ hack ma ọ bụ backdoor ntinye).
: ohere gị Spotify ntọala ma họrọ iyi site na listi.
• N'ihi na iOS ngwaọrụ ọrụ.
họrọ bandwit (gụgharia mma) na suut gị mkpa.
• N'ihi na desktọọpụ ọrụ
Ị nwere ike ịhọrọ site 2 nhọrọ: olu normalisation ma ọ bụ elu bitrate.
Ọ bụ ezie na ị pụrụ gbanwee ntọala na na enyere ndị bit àgwà gụgharia. Biko hụ na ị nwere ike njikọ Ịntanetị. Iji Spotify ọrụ na a ogbenye bandwit ma ọ bụ adịghị mma njikọ agaghị anapụta atụ anya ọrụ na àgwà nke music nwere ike ghara ịbụ na ihe ọma.
Ọzọkwa ịmafe ka elu bit ọnụego pụtara a ngwa ngwa download ọnụego, a pụtara na njikọ data atụmatụ i tụrụ ụtụ mkpa iji hụ na elu na-agba data nyefe. Ọ bụrụ na ndị atụmatụ anaghị akwado na ọsọ, ị pụrụ iche ọ bụla dị iche na gụgharia mma.
N'ihi ya, ọ na-atụ aro iji ezi, a pụrụ ịdabere na ahụ ike internet ọrụ iji mma gụgharia àgwà on Spotify.
> Resource> Spotify> Esi Spotify High Quality gụgharia?